ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्र’माण दिन तयार छु : डा. बाबुराम भट्टराई…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
October 9, 2020 79
गोरखा : बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नौ अर्ब रुपैयाँ भ्र’ष्टाचार गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आ’रोप लगाएका छन्।
पालुङ्टार नगरपालिका-६ पौवाटारमा आ’योजित राजनीतिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन प्रधानमन्त्रीले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको प्र’माण पेश गर्न आफू तयार रहेको बताए। ‘करोड र लाखका कुरा छोडौं, अरब, अरबको लु’ट भइरहेको छ।
म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ क’मिशन खाएर अ’लपत्र पारिरहेका छन्’, भट्टराईले भने, ‘मलाई थाहा छ यो कुरा। प्र’माणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु ।
यो मात्र होइन, अरु दस, आठ वटा आयोजनाबाट अर्बौंअर्ब क’मिशन खाएर मुखमा बु’झो लाएर बसेका छन्। चिट चोरेर आठ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले क’मिशनखोरसँगको साँ’ठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दु’र्दशा भएको हो।’
अर्को फरक प्रसंगमा भट्टराईले केपी शर्मा ओलीसँगको संगतले प्रचण्ड धु’रुधुरु रो’एर बसिरहेको आ’रोप लगाए। ‘प्रचण्डजी केपी शर्मा वलीको पछि लागेर त जानु भयो तर अहिले धु’रुधुरु रो’एर बस्नु भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘तपाईँहरु न’पत्याउनु होला, बढि कुरा गर्‍यो नभन्नु होला।
म उहाँको निवासमा गइरहेको हुन्छ। उहाँलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई सबै थाहा छ, किनभने प्रचण्डजीसँग अहिले पनि मेरो अ’त्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँ मसँग बि’लौना गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजी ओलीको फेला पर्नुभयो। ओलीले पछारेको पछारै छन्।’
बाहिरबाट दे’ख्नेले बाबुराम पनि नेकपामा जाँदै छ है भनेर गलत टिप्पणी गर्ने गरेको उनले बताए। ‘ओली ग’णतन्त्र र सं’घीयताका वि’रोधी हुन् भन्ने थाहा थियो। क’म्युनिष्ट होइनन् भन्ने पनि थाहा थियो। लौ डु’बियो, ब’र्बाद भयो क’मरेड भनेर प्रचण्डजी सँधै बि’लौना गर्नुहुन्छ।’
Prevके कुलमानले चुनाव लडे ७७ जिल्लाको जुनसुकै ठाउँबाट जित्न सक्छन् त ?
Nextफिनल्याण्डमा यी १६ वर्षिया किशोरी प्रधानमन्त्री सबै चकित ! एकै दिन्मा यसो गरिन…हेर्नुहोस् ।
कोभिडसँग ल’डने क्षमता विकासका लागि कस्तो खाने ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव…हेर्नुहोस् ।
जब ट्राफिक प्रहरीले आइजीपी थापाको चिट काटे… (सबैले जान्नै पर्ने शिक्षा)